အိန္ဒိယ - ဆန္ဒပြသူများသည်ဟောင်ကောင်ကို Wizard ပွဲစဉ်၌ပံ့ပိုးမှုပြ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ - ဆန္ဒပြသူများသည် wizard ပွဲစဉ်အတွင်းဟောင်ကောင်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသသည်
အိန္ဒိယ - ဆန္ဒပြသူများသည် wizard ပွဲစဉ်အတွင်းဟောင်ကောင်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသသည်
ဆန္ဒပြသူများသည် T-shirts နှင့် placards များကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့သည် ဟောင်ကောင် ၀ ါရှင်တန်မှ ၀ ိဇ္ဇာများကအဖွဲ့မှအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည တရုတ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်း .
အဆိုပါ Wizards အဆိုပါအနိုင်ယူ ကွမ်ကျိုး၏ရှည်လျားသောခြင်္သေ့ 137-98 ပြိုင်ပွဲတွင် Capital One Arena အတွင်း၌တစ်ဒါဇင်ကျော်ကျော်ဆန္ဒပြမှုများပါ ၀ င်သောပွဲစဉ်တွင်တရုတ် NBA နှင့်တရုတ်အစိုးရအကြားကွဲပြားမှုကိုဆန့်ကျင်သည်။
ဆန္ဒပြသူများသည်ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မှီနယ်ပယ်ပြင်ပလမ်းပေါ်ရှိ“ Free Hong Kong” တီရှပ်များကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ Freedom House မှ ၀ င်ရောက်ပြောဆိုသူများကဆန္ဒပြသူများက“ NBA အပေါ်အရှက်ကွဲခြင်း၊ ” တောင်ဥယျာဉ်မှန်တယ်” နှင့်“ NBA အတွက်မှတ်စုတို - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်မည်သည့်အမြတ်အစွန်းမှမရပါ။ ဆင်ဆာမရှိ! အမေရိကန်ကဟောင်ကောင်ကိုချစ်တယ်။ ''
NBA နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားပြနာများသည်နောက်မှစတင်ခဲ့သည် ဟူစတန်ရော့ကက် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဟောင်ကောင်ရှိအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူများအားသူ၏ထောက်ခံမှုကိုပြသခဲ့သည်။
မိုရီ၏မှတ်ချက်များအတွက် NBA သည်တောင်းပန်ခြင်းမရှိပါ။
Freedom House ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအသင်းဝင်အချို့သည်ပွဲအတွင်း၌ဆန္ဒပြရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပွဲတော်အတွင်းကွန်မြူနစ်ဝါဒအဖွဲ့၏သားကောင်များအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအဖွဲ့သည်ပွဲစဉ်အတွင်းကွင်းအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောကဏ္inများအတွင်းပွဲစဉ်အတွင်းတီရှပ်များကိုဖြန့်ဝေရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းအပြီးတွင်ပရိသတ်တစ် ဦး က“ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်! လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်! အခမဲ့ဟောင်ကောင်! နောက်ထပ်ပန်ကာသည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ဒုတိယအဆင့်မှအခမဲ့ဟောင်ကောင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တိဘက်အလံကိုင်ဆောင်ထားသည့်“ Free Tibet” အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်ပန်ကာနှင့်လုံခြုံရေးကိုချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးနိမိတ်လက္ခဏာကိုယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်ပန်ကာက၎င်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးပြီးတော့သူတို့ထိုင်ခုံကနေနှင့်အောက်ပိုင်းပန်းကန်ထဲကနေနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
စုန်းနည်းပြဖြစ်သူ Scott Brooks ကသူသည်တရုတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းအပြီးတွင်ဆန္ဒပြသူများကိုကြားခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒီထက်ပိုပြီးငါမကြားခဲ့ဘူး" ဟု Brooks ကဆိုသည်။ "ငါဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်"
Wizards ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေငြာချက်တစ်ခုတွင် "အဆောက်အအုံလုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများသည် Capital One Arena ၏ဆိုင်းဘုတ်များ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ ပိုစတာများ၊ ပွဲမှထွက်ခွာရန်ပရိသတ်များကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါ။ ''
ကွမ်ကျိုးနှင့် 76ers အကြားပွဲစဉ်တုန်းကလည်း Philadelphia တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာလုံခြုံရေးကပရိတ်သတ်နှစ်ယောက်ကိုဟောင်ကောင်မှာစာတန်းများကပ်ထားတာ၊
တရုတ်အသင်းရှုံးနိမ့်ရာတွင် CJ Harris က 25 ရမှတ်များရှုံးသည်။
အိန္ဒိယ - ကက်ရှမီးယားရှိခရစ်ကက်ကစားသမားများသည်မည်သို့အားဖြင့် & # 039; သော့ခတ်